किन आए भारतीय चर्चित सार्पसुटर नेपालमा ? – Etajakhabar
किन आए भारतीय चर्चित सार्पसुटर नेपालमा ?
काठमाडौं – राजधानीको कमलादीस्थित हेरिटेज प्लाजाभित्र बुधबार साँझ गोली चलेको छ । कर्पोरेट कार्यालयहरू रहेको सो प्लाजाभित्र गोली चलेको आवाज सुनिएपछि प्रहरीले खोजतलास गर्दा अटोमेटिक पेस्तोल र ५१ राउन्ड गोलीसहित प्रहरीले दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत पन्जाबका जसवीर सिंह र अरविन्द सिंह रहेका छन् । यो खबर टपेन्द्र कार्कीले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।
विगतमा व्यक्तिगत रिसिइबी, धम्की, फिरौती असुली, डकैती र अपहरणका थुप्रै घटनामा साना हतियार प्रयोग भइरहेका छन् । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का तीन महिनामा मात्रै नौ हतियार बरामद भएका छन् भने ३० जना पक्राउ परेका छन् । परिसरका अनुसार बरामद अधिकांश हतियारमा पेस्तोल र रिभल्बर छन् । फिरौती असुलीदेखि ससाना घटनामा साना हतियार प्रयोगबाट काठमाडौंमा यसको उपलब्धता सहज बन्दै गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा साना हातहतियारबाट सिर्जित अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताका तीन वर्ष तीन महिनामा उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट मात्रै ३० थान हतियार र २ सय ३ राउन्ड गोली बरामद भएको कार्यालयको रेकर्ड छ । प्रहरीले यही अवधिमा हतियार प्रयोगमा संलग्न १ सय ६१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । साना हतियारको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेपछि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय काठमाडौंको कमजोर सुरक्षाको फाइदा उठाई आपराधिक समूहहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा विशेष गरी अमेरिकामा निर्मित पिस्तोल, ९ एमएम स्वचालित चाइनिज र भारतीय पेस्तोल, ३ सय १५ बोर पेस्तोल, सिक्सर रिभल्बर, २२ क्यालिभर पिस्तोल, नेपालमै बनेका कटुवाजस्ता साना हतियारको प्रयोग बढी हुने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक १७, २०७४ समय: ८:४२:४४